Tag: biil | Martech Zone
Iska jir khayaanada qaansheegadka diiwaangelinta PayPal
Ganacsi ahaan, waxaan badanaa layaabay inta dacwadood ee igu soo dhacda taas oo aniga ila yaabisay. Adduunyo ka mid ah barnaamijyada jaban, macaamiisha yar-yar, iyo tiro badan oo ah hababka lacag-bixinta, waa inay faa'iido badan u noqotaa inuu noqdo khayaano internet maalmahan. Saaxiibkeyga wanaagsan, Adam, wuxuu saaka ii soo gudbiyay qaansheegad qaansheeg ah oo uu ka helay gurigiisa CRM. Si ka duwan sida emaylka loo yaqaan 'phishing phishing', ee qofka diraha ka been abuurayo cinwaanka e-maylkiisa, kan ayaa ah
Isniintii, September 11, 2017 Douglas Karr
Shirkadaha horumarinta arjiyada waxay kubixiyaan tan waqti ah horumarinta barnaamijyadooda laakiin badiyaa waxay seegaan mid kamid ah walxaha ugu xasaasiga ah ee loogu baahan yahay guusha - maaraynta rukunka. Mana aha dhibaato fudud. Inta udhaxeysa albaabada lacag bixinta, soo celinta, amaahda, qiimo dhimista, muddooyinka demo, xirmooyinka, caalamiga, canshuuraha bill biil soo noqnoqoshada waxay noqon kartaa riyo cabsi leh. Sida wax uun uun ku saabsan, waxaa jira madal loogu talagalay taas. Zuora. Zuora biilasha soo noqnoqda iyo rukunka Maareynta ayaa otomaatiijiya howshaada, hadey soo noqnoqoto, adeegsi, dhiirigelin, ama
Hogaaminta Kooxda Suuq geynta Dijitaalka ah - Caqabadaha jira iyo sida loola kulmo
Arbacada, December 28, 2016 Arbacada, December 28, 2016 Rachel McPherson
Tikniyoolajiyadda isbeddelaysa maanta, hoggaaminta koox suuqgeyn dijitaal wax ku ool ah leh ayaa dhib noqon kara. Waxaad la kulantay baahida loo qabo tiknoolajiyad hufan oo wax ku ool ah, xirfado sax ah, hababka suuqgeynta wax ku oolka ah, iyo caqabadaha kale. Caqabadaha ayaa sii kordhaya markii ganacsigu korayo. Sida aad u maareynaysid walaacyadan ayaa go'aaminaya inaad ku dambayn doonto koox hufan oo buuxin karta yoolalka suuqgeynta ee meheraddaada. Caqabadaha Kooxda Suuqgeynta Dijitaalka ah iyo Sida Loola Kulmo Miisaaniyad Ku Filan Midkood
Workamajig: Maamulka iyo Maareynta Mashruuca ee Hay'adaha Hal-abuurka leh
Khamiis, May 15, 2014 Douglas Karr
Workamajig waa nidaam ku saleysan websaydh lagu maareeyo dhaqaalahaaga iyo wakaaladaha suuqgeynta dhaqaalaha iyo mashaariicda macmiilka. In kabadan shirkadaha 2,000 waxay u adeegsadaan barnaamijyadooda maareynta suuqgeynta waaxyadooda gudaha. Workamajig waa mid la habeyn karo, softiweerka maareynta mashruuca ee maareynta mashruuca kaas oo hagaajinaya wax kasta oo ay wakaaladdaadu qabato - laga bilaabo ganacsiga cusub iyo iibka waxay keeneysaa shaqaale iyo fulin hal abuur leh, illaa iyo inta loo marayo wareegga mashruuca illaa xisaabinta iyo warbixinta maaliyadeed. Astaamaha Workamajig waxaa ka mid ah: Xisaabinta - warshad